Dagaalamayaasha Al-shabaab oo weerar culus ku qaaday deegaanka Deynuunaay ee gobolka Baay | Weheliye Online
Dagaalamayaasha Al-shabaab oo weerar culus ku qaaday deegaanka Deynuunaay ee gobolka Baay
Muqdisho (iftinews network) –Aroortii saakay ayaa mar qura laga war helay dagaal culus oo leysku weydaarsaday hub kala duwan ayaa ku dhaxmaray aroornimadii hore ee saakay ciidamada dowladda iyo Al-shabaab deegaanka Deynuunaay 26-KM u jira magaalada Baydhabo.
Dagaaalamayaal ka tirsan xoogagga Al-shabaab ayaa subaxnimadii hore ee saakay weerar culus ku qaaday ciidamada dowladda ee fariisinka ku leh halkaa, waxaana bilaawday dagaal oo dhaxmaray labada dhinac.
Dagaalka wali meelaha qaar la soo sheegayo in uu si goosgoos ah uga socdo lama oga ilaa iyo hadda khasaaraha ka dhashay, hasse ahaatee marka la eego xadiga iyo culeyska dirirta labada garabka waxaa suurtagal ah in uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo soo kala gaaray dhinacyada dagaallamaya.
Al Shabaab ayaa dhawr mar weerar ku qaaday degaanka Deynuunay oo ay ku sugan yihiin ciidamada militariga dowladda Soomaaliya,waxayna arrintaasi dhibaato ku noqotay shacabka halkaasi degan, oo cabsi ka muujinaya weerarada Al-shabaab.
Dagalkan ayaa imanaya xili maalin ka hor magaalada Baydhabo ka dhaceen Qaraxyo waaweyn oo galaaftay nolasha dad ka badan 20 ruux.
Previous articleMadaxweyne farmaajo Oo Booqday Dagmada Marka Gobolka Shabeellaha Hoose
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo waqti la qaatay bulshada ku dhaqan magaalada Marka +sawiro